Hankalaza ny 25 taona an-tsehatra : hifamotoana indray amin’ireo mpankafy azy i Nanie | NewsMada
Hankalaza ny 25 taona an-tsehatra : hifamotoana indray amin’ireo mpankafy azy i Nanie
Nanie sy ny feony miavaka… Aman-taonany no tsy nahitan’ny mpankafy azy an-tsehatra. Ho to kosa ny faniriana, satria mandalo eto an-tanindrazana ity mpanakanto ity.
Seho mandritra ny ora roa tsy an-kiato, hamerenana ireo hira nahafantarana an’i Nanie hatramin’izay, miampy ireo hira vaovao. Nampanantena ity mpanakanto ity, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, omaly, tetsy amin’ny Piment Café Behoririka, fa hotsaroana ny fiarahana mandritra ny fandalovany eto.
Fantatra nandritra izany fa hanamarika ny faha-25 taona niakarany an-tsehatra i Nanie amin’ity taona ity, ka aty an-tanindrazana no hanombohana izany. Ny marimarina kokoa, mandritra ny seho izay hotontosaina ny alahady 5 febroary ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro io, etsy amin’ny Carlton Anosy.
“Misy ireo hira nataoko manokana. Maro ihany koa ny hira niarahako tamina mpanakanto namana, ary nampanantena ireo fa hifanotrona amiko sy ny mpankafy mandritra ny fiarahana”, hoy ny nambaran’i Nanie. Anisan’ireo hiray sehatra aminyry Tovo J’Hay, Luk, Mahery, Solo Andrianasolo, Elsie, Farakely, Fanja Andriamanantena, sns.
Maharitra iray volana eto an-tanindrazana i Nanie. Tsy eto Antananarivo ihany, fa hisy koa ny seho izay hotontosainy any Mahajanga, Toamasina ary Antsirabe. Mety hisy koa ny seho faharoa eto Antananarivo, mialohan’ny hiverenany any Frantsa.